Sidee loo abuuraa dib u eegis tiro badan?
Hadda, qof walba waa ogyahay in dhabarka dambe aan loo abuurin. Dhismaha xidhiidhka ayaa ahaa farsamooyin farsameyn raadin sahal ah ka hor inta aan Google lagu aasaasin jadwalka Penguin. Maalmahan, haddaad qorto waxyaabo badan oo aad u soo dirto qaybo kala duwan oo goobaha soo gudbinta, waxay ku siin doonaan natiijooyin ama inaadan sababi doonin makiinada search engine. Sidoo kale, xasuuso, qofna ma yaqaanno waxa Google samayn doono marka xigta. Mar kasta oo aad isku daydo inaad ku ciyaarto algorithm search, waxaad u baahan tahay inaad diyaar u ahaato inaad ciqaabto.
Si kastaba ha ahaatee, ma aha sabab loo joojiyo sameynta wax isku xirnaansho. Taa bedelkeeda, waxaad u baahan tahay inaad baratid sida loo abuuro xiriir tayo sare leh oo habboon.
Ha aaminin qof kasta oo sheeganaya in dhismaha xidhiidhka uu dhintay. Backlinks ayaa ah qeybta koowaad ee kaalinta koowaad. Si kastaba ha noqotee, kaliya isku-dhafka iyo isla'egyadu waxay heli karaan natiijo.
Qoraalkan waxaa loogu talagalay inay kula wadaagto talooyin waxtar leh sida loo dhiso xiriiro hab la qabsan karo.
Sidee loo abuuraa aasaas dhisme caafimaad leh?
Waxaan u malaynaynaa in aad abuureyso qayb cusub oo ka kooban mawduucyo cusub oo doonaya in kor loo qaado bogga natiijooyinka raadinta Google. Maadaama aad ogtahay in natiijooyinka PR-ga kor u qaadey ee xiriirinta goobaha tayada, miyaanay macquul ahayn in ay abuuraan isku-xidhka sida ugu dhaqsiyaha badan ee suurtogalka ah? Ma aha macquul in la dhiso xiriiro badan oo soo gudbiya qaybta cusub ee muddada gaaban. Nashaadyada noocan ahi waxay u muuqdaan kuwo laga shakisan yahay Google. Xalka ugu fiican waa inuu Google ka caawiyo helitaanka iyo muujinta waxyaabahaaga. Waxay qaadan doontaa wakhti laakiin waxay leedahay qiime ka badan goobtaada. Marka content aad la dhejin doono, waxaad ku heli kartaa juice link organic iyo inaad sare u qaadid qiimeyntaada.
Sida loo caawiyo Google raadinta iyo muujinta mawduucaaga?
Si aad u dardar geliso habka index of content, waxaad isticmaali kartaa qalabka Alexa. Shabakadaha websaydhku waxay marwalba kala xajiyaan goobtan. Markaad soo geliso URL-yada domainka waxaad ka heleysaa bogga internetka, waxay si toos ah kuugu dari doontaa boggaaga cusub ee aad looqoateeyay database-ka. Markaad raadineyso guurtida mar kale marxalad kale, qaybtaada asalka ah ee asalka ah ayaa laga dhigayaa Google sidoo kale.
Hab kale oo wax ku ool ah oo lagu soo jiidan karo boogaha Google ee ku jira mawduucaaga waa in la abuuro jaantusyo xog-raadin ah. Waxay u shaqeyn kartaa adiga oo ah warbaahin bulsheed oo kaa caawineysa in si deg-deg ah loo eego iyo aragtida. Taasi waa sababta haddii mawduucaaga cusub uu ku caan baxay mashaariicda warbaahinta bulshada, waxay calaamad u tahay Google in dadka isticmaala ay helaan tayadaada iyo xiriirada qiimaha. Taas macnaheedu waa wakhtigii aad bilaabi lahayd xiriirinta dibadda ee hareerahaan tifaftiran tayo leh, xiriir kasta oo shabakadu wuxuu noqonayaa mid dabiici ah.
Si kastaba ha ahaatee, waxaad u baahan tahay inaad hubiso inaad la wadaagto waxtar leh oo faa'iido leh ee akhristayaasha content sida qoraallada cusub, boostada ama iskuxidhku waa inay siiyaan qiime dheeraad ah macaamiishaada mustaqbalka.
Sida caadiga ah, dhaqanka, dhismaha xiriirka ah ee diyaarka ah kama daneeyo isticmaalaha dhamaadka. Si kastaba ha noqotee, si aad u hesho juice tayo leh tayada oo aad u eegto dabiiciga indhaha makiinadaha raadinta, waxaad u baahan tahay inaad diirada saarto waxa ay dhageystayaashu ku mashquulsan rabaan. Akhristayaashaada waa in aysan ka qoomameynin in ay raacaan xiriir soo jeediyey Source .